Akụkọ - Emume inye ndị ọrụ pụtara ìhè na Jenụwarị 27, 2021
Mmemme onyinye a maka ndị ọrụ pụtara ìhè na Jenụwarị 27th, 2021
Emere onyinye maka ndị ọrụ pụtara ìhè na 2020 emere n’ehihie ụnyaahụ na Ngosipụta Zuru Okè. Emetụta nke abụọ nke COVID-19. Ndị ọrụ ibe ha niile gbakọtara n’elu ụlọ na 15F iji sonye n’ememe onyinye a na-eme kwa afọ maka ndị ọrụ pụtara ìhè. Nzukọ ahụ bụ Chen Fang nke ụlọ ọrụ nchịkwa na-elekọta.
O kwuru, na afọ pụrụ iche nke afọ 2020, ndị ọrụ ibe anyị niile emerila nsogbu ma nwee ọganiihu na-enye afọ ojuju, nke dị na mbọ nke ndị ọrụ ibe anyị niile. Ndị ọrụ taa pụtara ìhè bụ naanị ndị nnọchi anya. Ha nwere njirimara dị iche iche: ha na-ele ọrụ anya dị ka ebumnuche ha ma na-agbaso ịdị mma. Ọbụna na ọrụ ndị nkịtị, ha na-achọkarị ụkpụrụ dị elu. Ha na-echegbu onwe ha banyere ụlọ ọrụ ahụ, raara onwe ha nye na ịdị njikere inye onyinye.
Chen Fang kwuru: ndị ọrụ ndị ji nwayọ na-enye aka bụ azụ nke mmepe ụlọ ọrụ ahụ; Ndị ọsụ ụzọ nke ihe ọhụrụ na mmepe, ha na-emepe ahịa ndị si mba ofesi, na-eduzi omume ahụ, ma na-eme ka ọ mara ebe niile n’ụwa; Ndị isi ọrụ nke mgba siri ike, ha na-achịkwa nke ọma, na-abawanye ego ma belata mmefu.Our ndị ọrụ anyị nwere ezigbo agwa ndị a abụghị naanị otu n'ime ihe ndị na-agba ọsọ maka mmepe ngwa ngwa, kamakwa ndị na-eme ọrụ na ndị nketa nke ọdịbendị ụlọ ọrụ ahụ!
Na ngwụsị nke nzukọ ahụ, Onye isi oche Maazị O mere okwu mmechi ：
1. Ezigbo ndị ọrụ bụ onye nnọchianya nke ezigbo ndị otu anyị.
2. Debe ebumnuche ahịa na mmepụta na 2021, ụlọ ọrụ ahụ ga-aga n'ihu na-enwe ọganihu uto kwa afọ banyere 50%. Kpọkuo ndị ọrụ niile ka ha gaa n’ihu na-arụsi ọrụ ike.
3. Soro oku gọọmentị, kpọọ ka ọ ghara ịlaghachi obodo maka afọ ọhụrụ ọ gwụla ma ọ dị mkpa. Companylọ ọrụ a ga-enye ndị ọrụ ibe ha nọ na Shenzhen yuan 500, ma soro ha nọrọ afọ ọhụrụ dị iche.